पार्टी निकै जटिल मोडमा छ: प्रधानमन्त्री
मैले त्यसको जवाफ किन दिनुप-यो? वास्तवमा ती आरोप सही थिएनन्, अनुपयुक्त, अनुचित, झुठा र भ्रमपूर्ण थिए, तिनका बारेमा मैले स्पष्ट पार्नु नै जरुरी थियो।
यी आरोप या त त्यसबाट बदर हुनुपर्‍यो तब प्रधानमन्त्री र अध्यक्षको जिम्मेवारीमा बस्न मिल्छ। त्यसो होइन भने सदर हुनुपर्‍योर ती पद र ती जिम्मेवारीबाट हट्नुप-यो। यो हटाउने माग त पहिलेदेखि आएकै थियो। यसपटक हट्ने आधार यी हुन्, यसकारण हट्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ।
त्यसैगरी मैले अर्का अध्यक्षलाई हट्न भन्यो भने के हुन्छ? विधि पद्धतिका कुरा के हुन्छन्? सङ्गठनात्मक सिद्धान्तका कुरा के हुन्छन् ? त्यसमा एकपटक विचार गर्ने हो कि? किनभने मैले हट्न भनेँ भने त्यसले त अर्को वातावरण निर्माण गर्नसक्छ।
अर्को कुरा के हो भने अस्तिको प्रस्ताव नामक अभियोगपत्र आइसकेपछि यसअघिका हाम्रा सहमति, समझदारीको त त्यसैले अन्त्यको घोषणा ग-यो। त्यो पत्र बन्नुभन्दा पछि पुराना सहमति कायमै छन् भन्ने कुरा रहेन।
मैले त्यो पत्रले परिस्थिति अलिक गम्भीर मोडमा पु-यायो भनेर माधव कमरेडलाई भनें। उहाँले अँ धम्क्याउने? धम्क्याएर कोही डराउँदैन भन्नुभयो। अब डराउने खालको त यहाँ कोही छ जस्तो लाग्दैन।
त्यसमा फेरि थप के भन्नु छ र? त्यसमा अरूको पानी चित्र त देखेको छु नि!
त्यसमा त यसो हेर्दा पानी चित्र त आउँछ नि ! मैले कुरा गरेको छु र सबै सुनेको छु नि!